Zvinyorwa zveIan Cleary pamusoro Martech Zone |
Zvinyorwa na Ian Cleary
Kushambadzira kuri mukati kwakanaka. Iwe unogadzira zvemukati. Iwe unotyaira traffic kune yako webhusaiti. Iwe unoshandura imwe yeaya traffic uye wotengesa zvigadzirwa zvako uye masevhisi. Asi ... Chokwadi ndechekuti zvakaoma kupfuura nakare kose kuwana peji rekutanga Google mhedzisiro uye kutyaira organic traffic. Zvemukati kushambadzira zvave kuita zvine hukasha kukwikwidza. Organic kusvika pamasocial media chiteshi kuri kuenderera kudzikira. Saka kana newewo waona kuti kushambadzira kuri mukati hakungokwani, uchazoda
PRISM: Iyo Sisitimu Yekuvandudza Yako Yemagariro Media Shanduko
Chitatu, November 2, 2016 China, Kurume 4, 2021 Ian Cleary
Ichokwadi ndechekuti iwe haugone kutengesa pamasocial media chiteshi asi iwe unogona kuburitsa kutengesa kubva kune vezvenhau kana iwe ukaita uzere magumo ekupedzisira maitiro. Yedu PRISM 5 nhanho fomati inzira iwe yaunogona kushandisa kugadzirisa pasocial media kutendeuka. Muchikamu chino ticha tsanangudza matanho mashanu edanho uye nhanho kuburikidza nemuenzaniso maturusi aunogona kushandisa padanho rega rekuita. Heino PRISM: Kuvaka yako PRISM iwe
Iyo blog inogona kuve sosi huru yekutakura kune yako webhusaiti, asi inguva inopedza kugadzira blog zvinyorwa uye isu hatiwanzo kuwana mhedzisiro yatinoda. Paunoita blog, iwe unoda kuve nechokwadi kuti iwe unowana yakanyanya kukosha kubva pairi. Muchikamu chino, takatsanangura zvishandiso zvishanu zvinobatsira kuvandudza mhedzisiro yako kubva kublogging, zvichitungamira kune yakawanda traffic uye, pakupedzisira, kutengesa. 5. Gadzira Yako Mifananidzo Uchishandisa Canva An mifananidzo inotorwa